५७ प्रतिशत किसानलाइ थाहा छैन कुन बिषादीको प्रयोग गरे भनेर !
Home banner ५७ प्रतिशत किसानलाइ थाहा छैन कुन बिषादीको प्रयोग गरे भनेर !
चितवन, वैशाख १४ –
कृषिको पकेट क्षेत्र मानिएको राप्ती नगरपालिकाका ९९ प्रतिशत किसानहरुले विषादी प्रयोग गर्ने गरेको पाइएको छ । नगरपालिकाको कृषि शाखा र नेपाल जनजस्वास्थ्य प्रतिष्ठानले गरेको सर्वेक्षणले राप्ती नगरपालिकाका किसानले खाद्यबालीमा कुनै न कुनै प्रकारको विषादी प्रयोग गर्ने गरेको पाइएको हो ।
राप्ती नगरपालिका वडा नम्बर १ लाई आईपीएमयुक्त वडा घोषणाको लागि सञ्चालन गरिने कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न दुबीचौरमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा सो तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिएको हो । ४८ प्रतिशत किसानहरुले रासायनिक विषादी र ४४ प्रतिशत किसानले रासायनिक र जैविक दुवै विषादी प्रयोग गर्ने गरेको खाद्य सुरक्षाको लागि किसानस्तरमा काम गरिरहेको प्रतिष्ठानकी सिम्रन काफ्लेले जानकारी दिनुभयो।
राप्ती नगरपालिकामा व्यावसायिकरुपमा तरकारी खेती गर्दै आएका किसानहरुले अत्यधिक विषादी प्रयोग गर्ने गरेका छन् । १६ प्रतिशत किसानहरुले आफूले खाने तरकारीमा विषादी प्रयोग नगर्ने र बजारमा बिक्री गर्ने तरकारीमा विषादी प्रयोग गर्ने गरेको काफ्लेले जानकारी दिनुभयो।
सर्वेक्षणका अनुसार लगातार १० वर्षसम्म विषादी प्रयोग गर्ने किसानको संख्या ६० प्रतिशत रहेको छ । विषादी प्रयोग गर्ने किसानहरु मध्ये आफूले खाद्यबालीमा कस्तो प्रकारको विषादी प्रयोग गरेको छु भन्ने जानकारी नभएका ५७ प्रतिशत किसान रहेको काफ्लेले जानकारी दिनुभयो ।
सरकारले अत्यधिक हानिकारक मानिएको रातो रंगको विषादी प्रतिबन्ध गरेको छ । अहिले किसानले खाद्यबालीमा पहेलो र हरियो रंगको विषादी प्रयोग गर्दै आएका छन् ।
पहेलो रंगको विषादी मानव स्वास्थ्यको लागि हानिकार मानिएको छ । किसानहरुले पहेलो रंगको विषादी अत्यधिक प्रयोग गर्ने गरेका छन् । कार्यक्रममा जिल्ला कृषि विकास कार्यालय भरतपुरका प्रमुख सुधीर श्रेष्ठले चितवन जिल्ला खाद्यबालीमा सबै भन्दा बढी विषादी प्रयोग गर्ने जिल्लाको रुपमा चिनिएको बताउनुभयो ।
नगरपालिकको हिसाबले राप्ती नगरपालिकाका किसानहरुले अत्यधिक विषादी प्रयोग गर्ने गरेको पाइएको उहाँले बताउनुभयो । प्रमुख श्रेष्ठले चितवनमा उत्पादन भएको तरकारीमा बढी विषादी प्रयोग गरेको पाइएपछि काठमाडौंको कालिमाटी तरकारीमण्डीमा नष्ट गर्नुपरेको गुनासो गर्नुभयो । कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि राप्ती नगरपालिकाका उपमेयर इमानसिंह लामाले खाद्यबालीका विषादीको प्रयोग नियन्त्रण र व्यवस्थापन गर्न नगरपालिकाले जीवनाशक विषादी ऐन जारी गरेको जानकारी दिनुभयो ।
किसानले खाद्यबालीमा अत्यधिक विषादीको प्रयोग गर्न थालेपछि नियन्त्रण गर्न नेपालमै पहिलो पटक राप्ती नगरपालिकाले विषादी ऐन जारी गरेको उहाँले बताउनुभयो । किसानले अन्धाधुन्द खाद्यबालीमा विषादीको प्रयोग गर्न नपाउने, विषादी बिक्री वितरण, कारोबार, भण्डारण, ढुवानी र प्रयोगलाई व्यवस्थापन गर्ने उल्लेख छ ।
Previous articleकृषक मैत्री कार्यक्रममा गैडाकोट नगरपालिका
Next articleप्राथमिकतामा परेकै कृषि कार्यक्रम कार्यान्वयन हुँदैनन् (हेर्नुहोस् सरकारी कार्यक्रम कार्यान्वयनको अवस्था)